Nkume polishing igwe Manufacturers & Suppliers - China Stone Polishing Machine Factory
Automatic polishing Machine maka Granite
Nke a igwe na mba elu larịị nke konkiri nkume egweri na polishing akụrụngwa, JOBORN nwere R&D na n'ichepụta ya na-adabere nke uru nke yiri ngwaahịa n'ụlọ na mba ọzọ. The ụlọ ọrụ imewe nke igwe na-eduga na ụlọ ọrụ na-emekarị, egweri na polishing ef ...
Automatic polishing igwe maka mabul
Igwe a na mba dị elu nke igwe egweri na ngwa polishing, JOBORN nwere R&D ma mepụta ya dabere na uru nke ngwaahịa ndị dị n'ụlọ na mba ofesi. The ụlọ ọrụ imewe nke igwe na-eduga na ụlọ ọrụ na-emekarị, egweri na polishing arụmọrụ ...
Automatic Litchi-Mkpa egweri Machine
Nke a igwe na mba elu larịị nke nkume litchi-elu-egweri akụrụngwa, JOBORN nwere R&D na n'ichepụta ya na-adabere na uru nke yiri ngwaahịa na n'ụlọ na mba ọzọ. The ụlọ ọrụ imewe nke igwe na-eduga na ụlọ ọrụ na-emekarị, egweri arụmọrụ na-egweri ...
Igwe a na - eji kọlụm dị gburugburu dị ka ihe na-eme ka ọ na-ebuli elu na ala. The igwe bụ na ọdabara na ụgbọelu-egweri na polishing nke slabs na ukwuu dị iche iche ọkpụrụkpụ, ili ozu, na nkume na imewe. The worktable nwere ike họrọ maka egweri crafts camber n'ime ...
Stone Edge egweri Machine
Igwe na-egweri igwe nke igwe a na - ewepu diski mmiri ma tinye ya na nkwonkwo eju. Dabere na nha na ọkpụrụkpụ dị iche iche nke okwute ahụ, enwere ike ịkpụ ala n'akụkụ aka nri n'akụkụ ala nke nkume dị iche iche dị larịị. Oke nkpuchi gbara ọkpụrụkpụ na-enwu gbaa, n'akụkụ aka nri n'akụkụ aka nri m ...
Professional technical engineer raara onwe ya nye gị
Dị ka mkpa gị si dị, họpụta usoro nhazi na usoro atụmatụ kachasị mma